अक्सिजन प्लान्ट बनाउन BATAS foundation लाई बरिस्ठ समाजसेवी इशा गुरुङ बाट ५० हजार सहयोग !:: Mero Desh
अक्सिजन प्लान्ट बनाउन BATAS foundation लाई बरिस्ठ समाजसेवी इशा गुरुङ बाट ५० हजार सहयोग !
Published on: १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०९:४६
बेलायतनिवासी बरिस्ठ समाजसेवी इशा गुरुङ भनेपछि नचिन्ने कमै बेक्ती मात्र होला ! यो समाजमा तर धेरैले भने उहाँ लाई राम्रो संग चिनेका छन उहाँको नेपाल प्रती योग दान र समाजसेवा गरेको काम लाई रास्ट्रले सम्मान गर्न पर्ने देखिन्छ ! उहाको नेपालमा कमै जिल्लामा मात्र होला सहयोग नपुगेको प्राय विभिन्न जिल्लामा इशा गुरुङको तर्फ बाट सहयोग भनेर पुगेको हुन्छ !
उहाले आफ्नो बेक्ती गत तर्फबाट लाखौं सहयोग गरेका छन भने अभियान चलाएर करोडौं पनि संकलन गरेकाछन् र कतिपय उहाको कारण पुन:जन्म पनि पाएका छन् !उहाँ लाई भगवान मानेर पुजे पनि कुनै फरक नपर्ने समाजको लागि काम गरि सक्नु भएको छ रास्कोट अस्पताल मुसहर बस्ती जस्ता धेरै ठाउको अभियान चलाएर सफल भएको देखिन्छ!
यति मात्र होइन अझ धेरै महान काम लकडाउनको समय पैसा नहुने कम रकम मा खाना खान पाउने रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ भने ! उहाँ हरुको टिम हाम्रो नेपाल संगको स’हकार्यमा सडक भरी भोकै बसेका मजदुर हरुको लागि निशुल्क खान साथै विभिन्न जिल्लामा माक्स सेनिटाइजर बितरण पनि भै रहेको छ!
रात दिन पानी झरी नभनी उहाँ हरुको टिम आ’पतकालीन समस्याको समाधान गर्न पनि सरकार भन्दा पहिला संबंधि त ठाउँमा पुगेर राहत बितरण गरेको देखिन्छ ! सायदै उहा हरुको काम लाई हेर्ने हो भने नेपालमा अरु संघ संस्था भन्दा उदारणिय काम देख्न सकिन्छ ! यस्तै सं’क्रमित बाट जनता बचाउन BATAS foundation ले रकम संकलन गरि अक्सिजन प्लान्ट बनाउन लागेको उहाँ इशा गुरुङको तर्फबाट ५० हजार सहयोग रहेको छ!
पोखरामा कोभिडले धेरै मानिसको ज्यान लिए पछि ,अक्सिजन प्लान्ट बनाउनमा BATAS Foundation ले रक़म संकलित गर्दै रहेछ , यस जिबन बचाउने अभियानमा मेरो व्यक्तिगत सहयोग रू ५० हज़ार रहनेछ है Ashok Palikhe भेना ज्यु